NDijonge: ISyria kwiFoto kunye neNgcaciso- Vernissage kunye neNgxoxo · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Nge-Okthobha 7, 2021 17:00 PM - 20: 30
« WONKE AMEHLO KUTHI
NDijonge: ISyria kwiFoto nakwiNgcaciso-iMiboniso yoMfanekiso »
Vernissage kunye nengxoxo yephaneli neSyria
Iifoto zamagcisa: uGuevara Namer (umphathi / umgcini womboniso kunye nomfoti), u-Mohammed Badra (umhleli / umfoti), Ameer Alhalbi (panelist / umfoti), Mohammed Abdullah (panelist / umfoti)
Uqhushululu lwaseSyria kunye nemfazwe eyalandelayo mhlawumbi iphakathi kweziganeko ezibonakalayo ezibhalwe kakuhle kwimbali yanamhlanje. Kukho imifanekiso eyoyikisayo ethe yazitshisa ibe yingqondo yabantu. Umfanekiso ka-Aylan Kurdi elele engaphili kunxweme lwaseTurkey. Imifanekiso yeDrone yeebhombu zaseSyria nezixeko. Kodwa ayisiyiyo yonke into echaza iSyria, kwaye uninzi lwamaSyria alunakuze lube yimifanekiso echaza ilizwe okanye isizukulwana.
Lo mboniso unabafoti abali-10 baseSyria kujongwe ukuba ubenakho ukuqala kwengxoxo-mpikiswano kwaye ubonelele ngombono wabona abafoti baseSyria abafota imifanekiso yelizwe labo ngaphambili nangexesha lengxabano. Kwiminyaka yobuchwephesha, ukwaphula imifanekiso kunye nokuvavanya imeko apho babanjwa khona akukaze kubaluleke ngakumbi. Umboniso ke ngoko wenzelwe ukudala indawo apho kuxoxwa khona ngenkqubo yokufota kunye nemibuzo yokuziphatha efanelekileyo kwaye ngale ndlela incoko malunga nokufotwa kweSyria kuyakhuthazwa.
NgoLwesine, nge-7 ka-Okthobha, intetho yomnyhadala womboniso weefoto "NDijonge: Iimpawu ze-10 ezivela eSyria" ziya kwenzeka e-Oyoun, zilandelwe yingxoxo. Nceda uthathe ixesha ngaphambi kwengxoxo ukuze iifoto zabafoti zingene. (Ifoyile kumgangatho wokuqala)
→ Ukuqala komsitho: Okthobha 7th / 17:00 pm
→ Isiganeko simahla. Nangona kunjalo, ubhaliso luyafuneka- Qhagamshela apha
→ Inkqubo yangokuhlwa- Qhagamshela apha
Jonga phambili kulo mboniso ubangela umdla kwaye ufundise nathi!
Lo msitho yintsebenziswano phakathi kwe-Beirut kunye nee-ofisi zase-Berlin ze-Friedrich Naumann Foundation for Freedom and SyriaUntold eV
Qaphela: Umnyhadala wenzeka nge IsiArabhu nesiJamani ngaphandle kwe. Ukutolikwa ngaxeshanye kuya kubonelelwa.
UGuevara Namer (Imodareyitha) ngumfoti kunye nomenzi wefilimu waseBerlin. Waqala umsebenzi wakhe wobugcisa ngo-2005 eDamasko, isixeko awazalelwa kuso. Kumsebenzi wakhe, uNamer ujongana nezihloko zesazisi, ubufazi kunye nokudingiswa kwaye waxhaswa yimibutho eliqela yamanye amazwe.
U-Mohammed Badra (Undwendwe / iPhanist) ngumfoti waseSyria ovela eDouma kwaye uhlala eParis. Apho wafunda uyilo kwaye wasebenza njenge paramedic ngaphambi kokuba ajike kwikhamera ngo-2012.
Ameer Alhalbi (Undwendwe / ipaneli) wazalelwa eAleppo kwaye ngoku uhlala kwaye usebenza njengomfoti eParis. Kwi-2019 waphumelela kwiSikolo se-Speos sokuFota. Kukhuphiswano lweWorld Press Photo 2017, wawongwa indawo yesi-2 "yeendaba zembali". Umsebenzi wakhe unikwe amabhaso aliqela aphesheya.
UArtino (Mohammed Abdullah) (Undwendwe / iPhaneli) wazalelwa eDamasko. Ngo-2011 wajoyina imvukelo eSyria kwaye wabhala uxinzelelo lwaseSyria njengomfoti wemfazwe ngaphezulu kweminyaka emibini. Usebenze kumaphulo ahlukeneyo okukhuthaza kunye nokugcina izinto ezinje nge "Campaign yaseSyria" kunye ne "Mnemonic".
OKUBALULEKILEYO: Uvavanyo lwemihla ngemihla, lwe-corona test (uvavanyo olukhawulezileyo) okanye isatifikethi sokugonya esipheleleyo (kwiintsuku ezili-14 emva kogonyo lokugqibela olufunekayo, njengesatifikethi sokugonya nge-elektroniki, iphepha lokugonya iphepha alonelanga) okanye ubungqina bokubuyiswa (ubuninzi beenyanga ezi-6 abonelanga ) iyafuneka ukuthatha inxaxheba kuvavanyo oludala oluqinisekileyo) Ukukhusela umlomo kunye nempumlo kufuneka kunxitywe ngaphakathi (ngaphandle kwesihlalo). Imigaqo eqhelekileyo yemigama ye-corona ye-1,5 yeemitha kubantu abangaphandle kwekhaya lakho kufuneka ithotyelwe.
17: 00 - 20: 30
Imifanekiso, umboniso, Incoko